Katalytiyaha ugu Fiican Euro 4 soo saaraha iyo Warshada |Hualian
Mabda'a shaqada ee kicinta saddex-geesoodka ah
Beddelaha saddex-geesoodka ah waa qayb muhiim ah oo ku qalabaysan tuubada qiiqa.Way fududahay in la iska indho tiro waqtiyada caadiga ah, laakiin marka ay dhibaato jirto, waxay u horseedi doontaa qiiq madow, darawal daciif ah, iyo xitaa gubasho iskeed ah, taas oo si weyn u saameyn doonta waxqabadka mashiinka.
Sidee buu u shaqeeyaa kicinta saddex-geesoodka ah?
Marka matoorka gubashada gudaha uu gubanayo, waxa uu soo saari doona wasakhowga gaaska iyo walxaha waxyeelada leh ee deegaanka wasakheeya: carbon monoxide, hydrocarbons, iwm.
Marka qiiqa baabuurka heerkulkiisu sarreeyo uu dhex maro aaladda sifaynta, nadiifiyaha ku jira kicinta saddex-geesoodka ah ayaa kor u qaadi doonta fal-celinta kiimikaad-yaraynta qaar ee CO, HC iyo NOx.
Waxaa ka mid ah, CO waxa lagu osaydhsiiyaa heerkulka sare si uu u noqdo mid aan midab lahayn oo aan sun ahayn gaaska kaarboon laba ogsaydh, kaas oo nadiifin kara qiiqa baabuurta.
Sababaha xannibaadda kicinta saddex-geesoodka ah
Shiinaha ayaa mamnuucay isticmaalka gaasta rasaasta rasaasta, laakiin meelaha qaar, Sunta rasaasta ah ee loo yaqaan 'Antiknock Agents' ayaa wali si sharci darro ah loogu daraa shidaalka, taas oo keentay in kaarboonku ku ururo qolka gubanaya shidaalka ethanol.
Isla mar ahaantaana, Wakiilada Antiknock-ka ku jira sunta rasaasta ayaa dhaqi doona kaydka kaarboonka kolloidhka ee habka qaadashada iyo habka gubashada ilaa xad, kaydadka kaarboon-yada sidoo kale way fududahay in la xannibo kicinta saddexda dhinac.
2. Saliida injiinka
Isticmaalka muddada dheer ee saliidda ay ku jiraan sulfur iyo fosfooraska antioxidants waa sahlan tahay inay sababto xannibaadda kicinta saddex-geesoodka ah.
3. Caadooyinka wadista baabuurta
Marka baabuurka uu dardargeliyo oo uu si degdeg ah u joojiyo, waxa uu soo saaraa gubashada ugu badan ee aan dhamaystirnayn.Waddooyinka cidhiidhiga ah oo lagu kaxeeyo wakhti dheer iyo wakhti badan oo shaqo la'aan ah ayaa sidoo kale sababi doonta xannibaad saddex geesood ah.
Cawaaqibka xannibaadda ternary
1. Sii daynta qiiqa ayaa ka badan heerka caadiga ah
Way fududahay in la fahmo in ternary uu xiran yahay, iyo gaasaska waxyeellada leh sida CO, HC iyo NOx ayaa hubaal ah inay dhaafi doonaan heerka iyada oo aan beddeleynin oo si toos ah u sii deyn.
2. Isticmaalka shidaalka oo kordhay
Marka kicinta saddex-geesoodka ah uu bilaabo inuu xannibo, waxay saameyn doontaa shaqada caadiga ah ee dareeraha oksijiinta, sidaas darteed si sax ah uma xakameyn karto duritaanka shidaalka, qaadashada iyo dabka, ugu dambeyntiina waxay kordhisaa isticmaalka shidaalka.
3. Korontada hoos u dhaca
Dhacdadani waxay aad ugu caddahay baabuurta turbocharged.Marka qiiqa cadaadiska sare loo baahan yahay, xannibaadda saddex-geesoodka ah waxay sababtaa qiiq liidata, taas oo saameynaysa qaadashada hawada caadiga ah ee isha waxayna yaraynaysaa awoodda mishiinka.
Haddii dhammaan noocyada saamaynta la dul maro, awoodda baabuurka ayaa hoos u dhacaysa, shidaal-qaadiddu waa daciif, oo waxay dareemi doontaa xumaan marka la ordayo.
4. Matoorku wuu gariiraa oo inta badan wuu istaagaa
Xaaladani waa tan ugu naadirka badan.Waxa kaliya oo ay timaadaa marka ay gabi ahaanba xidhmaan kataliyaha saddex-geesoodka ah.Tani waa sababta oo ah gaasta qiiqa laguma sii deyn karo waqti, taasoo keentay dib u socodka dib u socodka, taasoo keentay gariir daran, hinaaso iyo ololka matoorka.
Habka nadiifinta catalytic ee saddex geesoodka ah
Xayiraadda "Three Way Catalyst" waxaa loo qaybin karaa saddex marxaladood:
Marxaladda koowaad waa marxalad xannibaad yar: waxay kaliya muujinaysaa in shaqada nadiifinta gaaska dabada la yareeyey iyo gaaska dabada ayaa ka sarreeya heerka caadiga ah.
Marxaladda labaad waa heerka xannibaadda dhexdhexaadka ah: kakan kiimikaad ayaa ku ururay dusha sare ee kicinta ilaa xad.Waqtigaan, cadaadiska dhabarka qiiqa ayaa kordha, isticmaalka shidaalku wuu kordhaa, korontaduna way yaraataa.
Marxaladda saddexaad waa heerka xannibaadda khatarta ah: waxay muujinaysaa in korontadu si dhab ah u dhacdo oo inta badan istaagto;Xaaladaha daran, dhuumaha qiiqa ayaa gubanaya casaanka oo xitaa sababa gubasho kedis ah oo baabuurka.
1. Habka nadiifinta kala furfurida iyo dhaqida
Habkani waa mid fudud oo qalafsan.Si toos ah u aad dukaanka 4S ama dukaanka dayactirka, u sheeg waxaad rabto, bixi kharashka, ka dibna sug nadiifinta.
Si kastaba ha ahaatee, faa'iido darrada habkan ayaa sidoo kale ah mid cad: kharashka shaqadu waa mid sarreeya oo waqti badan qaata, kharashka nadiifinta wuxuu u dhexeeyaa 500 yuan ilaa 800 yuan.
Haddii qiimaha beddelka kicinta saddex-geesoodka ah uu u dhexeeyo 1500 ilaa 8000 yuan, beddelka dareeraha oksijiinta waa qiyaastii 500 yuan, qiimuhu maaha mid jaban!
2. Habka nadiifinta dhalada deldelida
Si la mid ah dhalada caafimaadka, farsamayaqaanku wuxuu geliyaa wakiilka kiimikaad ee nadiifinta tuubada ceejinta iyo hawo-mareenka ee baabuurka sida "dhalada", si loo gaaro saameynta ka saarista kaydinta kaarboonka.
99% dhirta dayactirka ayaa ku talin doona in la isticmaalo habkan si loo nadiifiyo qolka gubanaya piston / valve gas / birta duridda shidaalka.
Si kastaba ha noqotee, ka dib markii aan fahamnay macluumaadka la xiriira raacayaasha, waxaan ogaanay in "habka nadiifinta dhalada ee laalaada" uusan saameyn weyn ku yeelan kaydinta kaarboonka ee ceejinta iyo taajka piston, laakiin waxay door ka qaadatay nadiifinta hawada hawada.
Hababka kore waxay leeyihiin khasaare iyaga u gaar ah.Ama kharashku waa sarreeyaa, saameyntuna ma muuqato, ama qayb yar oo ka mid ah kaydka kaarboonka ayaa la nadiifin karaa, saameyntuna waa liidata.
Sidaa darteed, ka saarista kaydka kaarboonka iyo nadiifinta catalysis saddex-geesoodka ah kuma tiirsanaan karto oo kaliya mid ka mid ah hababkan, laakiin sidoo kale nadiifinta joogtada ah waa tan ugu waxtarka badan.Ma aha oo kaliya inay caawiso si loo hagaajiyo dhaqaalaha shidaalka iyo heerka dib u eegista sanadlaha ah, laakiin sidoo kale waxay badbaadisaa lacag, welwel iyo waxqabad.
Ka faa'iidaysiga maalmaha ugu dambeeya ee fasaxa xagaaga, darawaladii hore waxay si dhakhso ah u isticmaali karaan sanduuqa saliidda ee wadada, "baabuurka soo jiid mar kale", soo noqo oo isticmaal wakiilada nadiifinta xirfadlayaasha si ay uga saaraan kaydka kaarboonka, nadiifi saddexda dhinac. kicinta oo soo celi wax qabadkii matoorka!
Hore: Metallic Monolith Catalytic Converter